🙏🙏🙏...သန်လျင် Star City City Loft Condo For Rent...🙏🙏🙏
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19746168 အတွက် Aung Ta Khit Real Estate Service. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင် Star Cityတွင် နေထိုင်ရန်သင့်တော်သော အခန်း၃ခန်းပါအခန်းငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19745892 အတွက် P.M.S Real Estate Services သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သန်လျင် Star City Condo.3လွှာ အခန်းလေး အမြန်ငှားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19745644 အတွက် Zaluck War Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City Condo,2Bedroom type အခန်းလေးကို အတန်ဆုံးဈေးနှုန်းလေးနဲ့ အမြန်ဆုံးငှားမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19745560 အတွက် Golden Myanmar Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19744389 အတွက် Shwe San Eain Thit Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19743348 အတွက် Shwe San Eain Thit Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သံလျင်မြို့နယ် StarCity Garden Condominiun 3Floor(3Bedroom)အခန်းကောင်း အမြန်ငှားမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19742205 အတွက် Pannthadinn May RealEstae သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သံလျင်မြို့နယ် StarCityအိမ်ရာဝန်းထဲရှိ City Loft Condominiun 3Bedroomအခန်းသန့်လေး ငှားရန်ရှိသည်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19741397 အတွက် Pannthadinn May RealEstae သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Star City ဝန္းထဲမွာရွိတဲ့ City Loft (3 bed) ျမစ္ View ဌားမည္-09-252627576
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19741373 အတွက် Shwe Pyi Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် R-19741303 အတွက် Mori Mori Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်